Thwebula Horizon 2.8.26 – Vessoft
Horizon – a software lula Gameplay ngesikhathi playthrough of the imidlalo on the Xbox 360. The software ikuvumela ukuba ushintshe izilungiselelo imidlalo eziningi, kuhlanganise Call of Duty, Grand Theft Auto, Halo, Space Dead and uchungechunge imidlalo FIFA, Assassin sika Creed, Forza njll Horizon kwenza umdlali ukuze uthole inombolo angenamkhawulo of impilo, vula yonke impumelelo noma imiklomelo, uthole ammo elingapheli futhi eningi play imali. Isofthiwe iqukethe inqwaba amathuluzi ukulungisa izidingo umsebenzisi. Horizon ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Amandla ukushintsha Gameplay
Ukusekela imidlalo eziningi
Amazwana on Horizon:
Horizon Ahlobene software:
Umbhalo abahleli Ithuluzi elinamandla layout kwemibhalo ezingeni okhokhelwayo. Isofthiwe ifakwe amathuluzi ekhethekile eziphambili idokhumenti processing.